Julayi 2017, irekhodi elisha lokushisa lomhlaba jikelele | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba kukhona amarekhodi asezingeni lokushisa lomhlaba jikelele, lo Julayi odlule uboshelwe ingxenye kaJulayi wangaphambilini ka-2016. kudlulwe ngo-0,01ºC. Kodwa-ke, into enelukuluku mayelana nale datha ngokwayo ayimeleli lokho, ukuthi bekuyinyanga efudumele kakhulu kaJulayi, kepha ayibonwanga kusengaphambili.
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, sithumele ukuthi bekuyini akunakwenzeka, ukuthi u-2017 uzophenduka unyaka wamarekhodi okushisayize kungabuye kufudumele. Amarekhodi endawo aqoshwe, amanye ayizizwe, kepha uJulayi uyakuqinisekisa ukuthi uma lamazinga okushisa ehla, enza kancane. Amarekhodi amaphakathi omhlaba aqhamuka ku-1880, kusukela ngaphambi kokuba izilinganiso ezazikhona zingayembozi ngokwanele iplanethi. Ngalesi sizathu, le nyanga kaJulayi ibe iyona efudumele esikhathini se-1880-2017.
Amazinga okushisa afanayo kuzo zonke izinyanga
Amazinga okushisa aphakathi komhlaba ngenyanga kusukela ngo-1880
Ngaphandle kwenyanga kaJulayi, zonke izinyanga ezedlule zalo 2017 bezilingana noma zingaphezu kokukodwa kokubanda kweshumi kunalezo zezinyanga ezifanayo zika-2016. Ku-graph enikezwe yi-Goddard Institute for Space Studies (GISS ), UMnyango Wokuhlaziywa Kwethempeli Lokuhlaziya (GISTEMP) ulungiselele leli grafu lapho kutholakala khona uthayi oseduze noJulayi owedlule ngo-2016 maqondana nokushisa okuphezulu okungajwayelekile.
Umbiko wale nto ungatholakala kuwebhusayithi esemthethweni yalo mnyango weNASA kuwebhusayithi yakho. Ukuhlaziywa kwayo nyangazonke kufana namarekhodi eziteshi zezulu eziyi-6.300 XNUMX emhlabeni jikelele. Ezinye zezinsimbi zokulinganisa zitholakala kuma-buoy, emikhumbi, naseziteshini zocwaningo ze-Antarctic.
Yize umdwebo ongenhla ucace bha, iNASA yenze lokhu kugqwayiza ekuqaleni konyaka. Amazinga okushisa ahlukene omhlaba wonke avelile kusukela ngo-1880 avela. Izinguquko esibhekene nazo zingaphezu kokusobala.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Julayi 2017, irekhodi elisha lokushisa lomhlaba jikelele
Uma singayeki ukufudumala kwembulunga yonke, kuzoba nokufa kwabantu ngaphambi kwesikhathi okuyizinkulungwane ezingama-60 ngonyaka ka-2030